tert-Butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) - APICMO
ထုတ်ကုန်များ > tert-Butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5)
ကျနော်တို့ CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းများအောက်တွင်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် tert-Butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ် synthesize နှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
tert-Butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) ကဗီဒီယို
tert-Butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) ဖျေါပွခကျြ
Tert-Butyl n- (2-bromoethyl) carbamate 2-bromoethylamine သို့မဟုတ် (ထိုကဲ့သို့သော di-tert- အဖြစ် tert-butoxy carbonyl (အဆောက်အအုံ) အုပ်စုတစ်စု၏နိဒါန်းတစ်ခုအေးဂျင့်နှင့်အတူ၎င်းဆား၏တုံ့ပြန်မှုကထုတ်လုပ်ထားတဲ့တစ်ဦးဝင်းဖြစ်ပါသည် butyl dicarbonate) (အောက်ပါဓာတုတုံ့ပြန်မှုဖော်မြူလာကိုရည်ညွှန်း) နှင့်တစ်ဦးမ synthetase တစ်ခု inhibitor များ၏ပေါင်းစပ်မှုအတွက်အလယ်အလတ်တစ်ဦးတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်အသုံးဝင်သောတစ်ဦးဝင်းဖြစ်ပါတယ်။
tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate များ၏ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်. အောက်ပါသူတွေကိုဥပမာ, ပြီးသားလူသိများခဲ့ကြသည်။
tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate, ဌာန၏ 2-bromoethylamine တစ်ခုသို့မဟုတ်ဆားတို့ကိုမျက်မှောက်၌တစ်ဦးရေတွင်ပျော်ဝင်အရည်ပျော်ပစ္စည်းတစ်ခု tert-butoxy carbonyl အုပ်စုတစ်စုမိတ်ဆက်အနေနဲ့အေးဂျင့်နှင့်အတူတုံ့ပြန်ရန်ဖန်ဆင်းထားသည်များ၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်တစ်ဦးကဖြစ်စဉ်ကို တစ်ဦး crystallizing အရည်ပျော်ပစ္စည်းများနှင့်အမျိုးအနွယ်ကို crystals အဖြစ်ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်ပြီးတော့ရေ tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate ၏ crystals သို့ဖြစ်. အထဲကကွဲကွာနေကြမထွက်ရတုံ့ပြန်မှုဖြေရှင်းချက်မှဆက်ပြောသည်နေကြသည်။
tert-Butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
MDL အရေအတွက် MFCD02683428
InChI Key ကို TZRQZPMQUXEZMC-UHFFFAOYSA-N ကို
ဓာတုအမည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်း 2- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) ethylebromide
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 224.098
အပြုံး CC ကို (C) (C) OC (= အို) NCCBr
အရည်ပျော်မှတ် 30 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ° 32
tert-Butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
(39684-80-5)GHS H ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်:
(39684-80-5)GHS P ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်:
tert-Butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) ဆောင်းပါးများ
အတိတ်, ပစ္စုပ္ပန်နှင့် auxin သုတေသနအတွက်ဓါတုဗေဒဇီဝဗေဒ၏အနာဂတ်
စက်ရုံဟော်မုန်း auxin သို့သုတေသနအမြဲတင်းတင်းသေးငယ်တဲ့မော်လီကျူးများအသုံးပြုမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေခဲ့ပြီး ... ။
ACS ဓာတု Biology2009
2,6-dichloro- ပြင်ဆင်နေများအတွက်တစ်ဦးကဝတ္ထုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် 2,5,6-trichloronicotinic အက်ဆစ် 2,6-dichloro-3-chloromethylpyridine တုံ့ပြန်ပါဝင်သည်ထားတဲ့ထုတ်ဖော်တာဖြစ်ပါတယ် ...
Ciba-Geigy ကော်ပိုရေးရှင်း - US3956340, 1976
tert-Butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) နည်းပညာပိုင်းဝန်ဆောင်မှု:
tert-Butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း:
အဘို့အ2ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း tert-Butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5)
Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) တစ်ခုမှာတော့-Depth နိဒါန်း
ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ရန်အပေါင်းတို့နှင့်တကွကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန် cGMP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့်လိုက်နာရန်, Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate.At APICMO ပမာဏ synthesize ။
Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate ဖျေါပွခကျြ
Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) 2-bromoethylamine ထွက်ပေါ်လာတဲ့ညီမျှခြင်းသို့အဆောက်အအုံ-အုပ်စုသည် (tert-butoxy carbonyl) မိတ်ဆက်ပေးသောအခြားအေးဂျင့်နှင့်အတူဓာတ်ပြုပြီးသည့်အခါထုတ်ပေးသည်။ ဤသည်တုံ့ပြန်မှုဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ် (NaOH) နှင့်တစ်ဦးရေတွင်ပျော်ဝင်အရည်ပျော်ပစ္စည်း၏ရှေ့တော်၌အရပျကိုကြာပါတယ်။ ရေ crystal တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အဆုံးထုတ်ကုန်၏ကျန်ထံမှ Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate ၏ခွဲခြာပိုကောင်းစေပါတယ်။
ဒီထုတ်ကုန် electrophilic နှင့် nucleophilic termini နှင့်အတူဖလိုရင်းနဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်၏ NO synthetase နှင့်ပြင်ဆင်မှု၏တားစီးများအတွက်ဒြပ်အလယ်အလတ်ဖြစ်ပါတယ်။
Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ:
Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
အဘယ်သူမျှမ CAS ။ 39684-80-5
ဓာတုနာမကိုအမှီ 2- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) ethylbromide
သိပ်သည်းဆ (ဆ / စင်တီမီတာ3) 1.321
ပွက်ပွက်ဆူနေသောအမှတ် (C) 262.23
Flash ကိုအမှတ် (C) 112.43
IUPAC name ကို Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate
အရည်ပျော်အမှတ် (C) 30 -32
Monoisotopic အစုလိုက်အပြုံလိုက် (ဆ / mol) 223.021
နာမ် · Tert-butyl-2-bromoethylcarbamate
· 2- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) ethyl ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ bromine
· Tert-Butyl n- (2-bromoethyl) carbamate
· (2-bromo-ethyl) -carbamic အက်ဆစ် tert-butyl Ester
· 2- (tert-Butoxycarbonylamino) ethyl ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ bromine
Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) ၏ဓာတု & ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Properties ကို
အဆိုပါထုတ်ကုန် ethyl acetate, chloroform နှင့် dichloromethane အတွက်ပျော်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်
ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှောင်ကြိုး အလှူရှင်အရေအတွက် - 1 ယူနစ်
လက်ခံသူအရေအတွက် - 2
အခမဲ့ Rotate နှောင်ကြိုး 4
Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) အဝါရောင်အရည်တစ်ခုအရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
39684-80-5 computing Properties ကို
XLogP3-AA ကို 1.7
အခိုးအငွေ့ဖိအား (mmHg) 0.011
Topological ဝင်ရိုးစွန်းမျက်နှာပြင်ဧရိယာ 38.33 တစ် ^ 2
အတိအကျ Mass (ဆ / mol) 223.021
အခိုးအငွေ့၏ Enthalpy (ကီလိုဂျိုး / mol) 50.006
Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate ၏အကြံပြု Synthesis လမ်းကြောင်း
Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) ၏လျှောက်လွှာ
electrophilic နှင့် nucleophilic termini နှင့်အတူဖလိုရင်းနဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်၏ပြင်ဆင်မှုအဘို့တစ်ဦးကအဆောက်အဦးပိတ်ပင်တားဆီးမှု
ဒါဟာ biphenyl linker ပေါင်းစပ်အတွက်အသုံးဝင်သည်
အခါအသားအရေ sensitivity ကိုအခါအသားအရေနှင့်အဆက်အသွယ်
Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) ကိုသုံးပြီးတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆောင်ရွက်ချက်များ
မည်သည့်မြေမှုန့်သို့မဟုတ်အငွေ့ trapping များအတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အိပ်ဇောလေဝင်လေထွက်အတွက်အငွေ့ပါးပျဉ်းထထားပါ။ ညစ်ညမ်းလေထုကိုစင်ကြယ်စေဘို့လေထုသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းတွေထည့်သွင်းပါ။ ပထမဦးဆုံးအကူအညီစီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါမှာအခန်းထဲမှာ eyewash လွယ်ကူ access များအတွက်နေရာလေးကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုရေချိုးခန်းတပ်ဆင်ထားရပါမည်။
အတည်ပြုမျက်မှန်, ရော်ဘာလက်အိတ်, impervious ဘွတ်ဖိနပ်, Full-မျက်နှာမျက်နှာဖုံးနှင့်အကြံပြုအသက်ရှူကိရိယာတွေနဲ့လုံးဝခန္ဓာကိုယ်ဖုံးအုပ်ထားပါ။
2 ။ ရှေးဦးသူနာပြုဆောင်ရွက်ချက်များ
လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေဖို့လူတစ်ဦးပြောင်းရွှေ့ပြီးအဆင်ပြေအသက်ရှူကိုယ်ဟန်အနေအထားမှသူတို့ကိုနေရာ။ သတိလစ်နေလျှင်, အတုအသက်ရှူကိုအသုံးပြုဖို့သို့မဟုတ်လက်ရှိအခြေအနေပေါ် မူတည်. အောက်စီဂျင်ထောက်ခံမှုပေးပါ။ အနည်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုရှိမယ့်လျှင်ဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
မျက်ကပ်မှန်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ, သူတို့ကိုပယ် ယူ. အအေးပြေးရေတွေအများကြီးအတူမျက်စိရှင်းလင်းရန်။ လက္ခဏာများအပေါ်စစ်ဆေးနေစဉ် 10 မိနစ် 15 အဘို့ဤလုပ်ပါ။ ယားယံဆက်ရှိနေသေးသည့်အခါဆရာဝန်တစ်ဦး၏အကူအညီရှာကြလော့။
အပျော့စားဆပ်ပြာတစ်ဦးလုံလောက်သောငွေပမာဏနှင့်အတူအစက်အပြောက်ဆေးနှင့်ရေ running ။ ပုံမှန်မဟုတ်သောမတည့်တုံ့ပြန်မှု, နာကျင်ခြင်း, ချေးနှင့်လာခြင်း၏အမှု၌ဆေးကုသရယူပါ။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပထမဦးဆုံးအကူအညီပုဂ္ဂိုလ်သတိအခါသာသက်ဆိုင်သည်။ မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့အနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နှုတ်တော်ထွက်ကိုလျှော်နှင့်သင်မမှန်ခံစားရလျှင် water.Contact ၏တစ်ဝက်လီတာဆရာဝန်တစ်ဦး, တစ်ဦး toxicologist, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအဆိပ်စင်တာမှတက်ကိုသောက်လော့။
3 ။ Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate ကိုင်တွယ်
ဓာတုနှင့်တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ် minimize လုပ်ဖို့အတည်ပြုဂီယာဝတ်ဆင်
Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate ကိုင်တွယ်နေစဉ်အရက်သောက်စား, ဒါမှမဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်ရှောင်ကြဉ်ပါ
4 ။ Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate ၏သိုလှောင်မှုကို
-30 ° C နဲ့တစ်ဦးရေခဲသေတ္တာထဲမှာဒါမှမဟုတ်စိုစွတ်သောရေခဲအောက်မှာ -10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အကြားမှာသိမ်းဆည်းထားပါ
Store ကို Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate တက်သော့ခတ်
တစ်လေဝင်လေထွက်ဧရိယာ၌ Store က
Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate သုံးပြီးပြီးနောက်,
လက်, အရေပြား, နှင့်စွန်းသောအဝတ်ကိုလျှော်ခြင်း
သင့်လျော်စွာ, အအသုံးပြုသောလက်အိတ်, ညစ်ညမ်းရေယာဉ်များနှင့်ပါအကြောင်းအရာများကို၏ကျန်များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး
6 ။ မီးထိန်းချုပ်ရေး
အပူလာသောအခါ Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများသို့ decomposes ။ အဆိုပါလောင်ကျွမ်းထုတ်ကုန်နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်, ကာဗွန်၏အောက်ဆိုဒ်နှင့် HBr ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးငရဲမီး၏အမှု၌, ထိတွေ့မှုကန့်သတ်သင့်လျော်တဲ့ Full-မျက်နှာမျက်နှာဖုံးနှင့်အသက်ရှူကိရိယာဝတ်ဆင်။ ပေါ်လီမာရေမြှုပ်ခြောက်သွေ့ဓာတုအမှုန့်, ရေမှုန်ရေမွှား, ဒါမှမဟုတ် CO သုံးပြီးမီးငြိမ်းအေး2.
7 ။ မတော်တဆဖြန့်ချိဆောင်ရွက်ချက်များ
ရေလိုင်းများသို့မဟုတ်ရေနုတ်မြောင်းဝင်ရောက်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်ကနေဓာတုကာကွယ်တားဆီးဖို့ယိုနှင့် spillages နှင်ထုတ်။ , ထိုမြေမှုန့်ကိုတက်လှည်းဟာအစိုင်အခဲတုံးကောက်, နှင့်အရည်ထုတ်ကုန်ကိုစုပ်ယူ။ ဒေသခံစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ၏စွန့်ရှေ့တော်၌တံခါးပိတ်ကွန်တိန်နာအတွင်းယိုဖိတ်စုဆောင်းပါ။
8 ။ Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate ၏တည်ငြိမ်မှု & reactivity
Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) ထိန်းချုပ်ထားသောအပူချိန်နှင့်ဖိအားအောက်မှာတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့၎င်းသည်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ပေါင်းများနှင့်အက်ဆစ်အကြောင်းမဲ့တဲ့အခါအလွယ်တကူဓာတ်ပြုပြီးနှင့် decomposes ။
9 ။ 39684-80-5 ဓာတုရှင်း
Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate အနေနဲ့စက်နှိုးအရည်ပျော်ပစ္စည်းနှင့်အတူရောထွေးနှင့်ဓာတုမီးဖိုထဲထမီးရှို့ရမည်။ အဆိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ scrubber နှင့်တစ်ဦး afterburner ရှိခြင်းရပါမည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တစ်လိုင်စင်ရစွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းကုမ္ပဏီ၏ဝန်ဆောင်မှုရှာကြာလော့။
10 ။ shipping အင်ဖို
သင်္ဘော Tert-butyl n- (2-bromoethyl) မြေပြင်သို့မဟုတ်လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်စေဘို့အကြံပြုအခြေအနေများအောက်တွင် carbamate ။
Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) စည်းမျဉ်းပြန်ကြားရေး
Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate သုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေး, သို့မဟုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက်လုံခြုံ product အဖြစ်အတည်ပြုထားသည်။ ဒါဟာမဆို internationalsafety စံချိန်စံညွှန်းများဖောက်ဖျက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏သိပ္ပံပညာရှင်များသုတေသန, မူးယစ်ဆေးရှာဖွေတွေ့ရှိမှု, ဓာတုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အသက်နှင့်ပစ္စည်းသိပ္ပံ, Chromatography နှင့်အခြားဆက်စပ်လယ်ကွင်းသက်ဆိုင်သောအားလုံးဒေသများရှိကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်။
Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5) အစုလိုက်အမိန့်နှင့်စျေးနှုန်း
အမြောက်အများအတွက် Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate လိုအပ်နေ? ဆက်သွယ်ရန် APICMO ရဲ့ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုယူနစ်နှင့်ကိုသင်လုပ်ချင်တဲ့အရေအတွက်သိကိုးကားရနှင့်တစ်ဦးအမိန့်ကိုလုပ်ကြကုန်အံ့။
Malcolm Sainsbury, Elsevier, 1 ဇန်နဝါရီ 1992, သိပ္ပံ, Aliphatic ဒြပ်ပေါင်းများမှာ: Aliphatic ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်၏ Monocarbonyl အနကျအဓိပ်ပါယျ, သူတို့ရဲ့ Analogues နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ, စာမျက်နှာ 40-42 ။
Randall R. Watts, ကျန်းမာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုသုတေသနဓာတ်ခွဲခန်း (သုတေသနတြိဂံပန်းခြံ, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား), ကနျြးမာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုသုတေသနဓာတ်ခွဲခန်း, သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးရုံး, အမေရိကန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအေဂျင်စီ, page19-78 ။
tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate များ၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် Makoto Momomoto, Yoshiaki ဆူဇူကီး Minoru, YamagamiKeisuke, MatsumotoYusuke, Sakaguchi, Process ကို။
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်သည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးရေးစင်တာ။ ဆေးပညာ၏အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်, Pubchem, Tert-butyl n- (2-bromoethyl) carbamate, ကဏ္ဍများ 1-11 ။
အကောင်းဆုံး tert-Butyl ဈအစဉ်အဆက်ခဲ့ကြ n- (2-bromoethyl) carbamate နှင့်ဝန်ဆောင်မှု, Nice အတွေ့အကြုံကို